Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukusinda koMhlaza Wemiphunga Kwandile
I-logo ye-American Lung Association
Ingxelo eNtsha: Ukusinda koMhlaza Wemiphunga kuye kwanda, kodwa kuhlala kusezantsi kakhulu kubantu bemibala
entsha Ingxelo ye "State of Lung Cancer". ibonisa ukuba izinga lokusinda komhlaza wemiphunga kwiminyaka emihlanu linyuke nge-14.5% kuzwelonke ukuya kuma-23.7% kodwa lihlala lisezantsi kakhulu phakathi koluntu lwemibala. Umbutho we-American Lung's 4th ingxelo yonyaka, ekhutshwe namhlanje, ibalaselisa indlela inani lomhlaza wemiphunga lihluka ngayo ngokwelizwe kwaye livavanya izikhombisi eziphambili kulo lonke elase-US kubandakanya: iimeko ezintsha, ukusinda, ukuxilongwa kwangoko, unyango lotyando, ukungabikho konyango kunye namazinga ovavanyo.
Ngokutsho kwengxelo, ukongeza kumazinga asezantsi okusinda, abantu bebala abafunyaniswe benomhlaza wemiphunga bajongana neziphumo ezibi xa kuthelekiswa nabamhlophe, kubandakanywa amathuba amancinci okufunyaniswa kwangoko, amathuba amancinci okufumana unyango lotyando kwaye kusenokwenzeka ukuba bangalufumani unyango. Lo ngunyaka wesibini apho ingxelo "yeState of Lung Cancer" iphonononga umthwalo womhlaza wemiphunga phakathi kwamaqela amancinci ngokobuhlanga kunye nobuhlanga kumanqanaba kazwelonke nakwarhulumente.
“Le ngxelo iqaqambisa iindaba ezibalulekileyo – abantu abaninzi abasinda kumhlaza wemiphunga; nangona kunjalo, ikwagxininisa into yokuba, ngelishwa, ukungafani kwezempilo kuyaqhubeka kuluntu lwemibala. Ngapha koko, ngelixa izinga lokusinda komhlaza wemiphunga wesizwe linyuke laya kutsho kuma-23.7%, lihleli kuphela kuma-20% kuluntu lwemibala kunye ne-18% kubantu abaMnyama baseMelika. Wonke umntu ufanelwe yithuba lokuphila ubomi obupheleleyo nobunempilo, kuninzi ekufuneka kwenziwe ukulungisa le mahluko kwezempilo,” utshilo uHarold Wimmer, uMongameli weSizwe kunye ne-CEO yoMbutho wamaLung.
Baphantse babe ngama-236,000 abantu base-US abaza kufunyaniswa benomhlaza wemiphunga kulo nyaka. Ingxelo ka-2021 "yeState of Lung Cancer" ifumene ezi ndlela zilandelayo zelizwe kumazinga okusinda, ukuxilongwa kwangoko, kunye nonyango lwesi sifo:
Izinga lokusinda: Umhlaza wemiphunga unelona zinga liphantsi leminyaka emihlanu yokuphila kuba iimeko zisoloko zifunyaniswa kumanqanaba amva, xa kunqabile ukuba zinyangeke. Umyinge wesizwe wabantu abaphila kwiminyaka emihlanu emva kokuxilongwa ngumhlaza wemiphunga ngama-23.7%. Amazinga okusinda ayengcono kakhulu e-Connecticut kwi-28.8%, ngelixa i-Alabama ibeka indawo embi kakhulu kwi-18.4%.
Ukuxilongwa Kwangoko: Kuzwelonke, kuphela ngama-24% eemeko ezifunyaniswa kwangethuba xa izinga lokusinda leminyaka emihlanu liphezulu kakhulu (60%). Ngelishwa, i-46% yamatyala ayibanjwa kude kube sekupheleni kwexesha xa izinga lokusinda liyi-6% kuphela. Amazinga okuxilongwa kwangaphambili ayengcono kakhulu eMassachusetts (30%), kwaye embi kakhulu eHawaii (19%).
Uvavanyo lomhlaza wemiphunga: Ukuhlolwa komhlaza wemiphunga ngedosi ephantsi ye-CT scan zonyaka kwabo basemngciphekweni omkhulu kunokunciphisa izinga lokufa komhlaza wemiphunga ukuya kutsho kuma-20%. Kuzwelonke, kuphela yi-5.7% yabo basengozini enkulu abaye bahlolwa. I-Massachusetts inelona zinga liphezulu lokuhlola kwi-17.8%, ngelixa i-California ne-Wyoming zinezona zisezantsi kwi-1.0%.
Uqhaqho njengekhosi yokuQala yoNyango: Umhlaza wamaphaphu unokunyangwa ngotyando ukuba ufunyaniswe kwangethuba kwaye awunwenwanga. Kuzwelonke, yi-20.7% kuphela yamatyala enziwe utyando.
Ukunqongophala koNyango: Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni izigulane zingafumani unyango emva kokuxilongwa. Ezinye zezi zizathu zisenokungathinteleki, kodwa akukho mntu kufuneka angaphathwanga ngenxa yokungabi namboneleli okanye ulwazi lwesigulana, ibala elinxulunyaniswa nomhlaza wemiphunga, ukufa emva kokuxilongwa, okanye iindleko zonyango. Kuzwelonke, ama-21.1% eemeko azifumani nyango.
Ukhuseleko lweMedicaid: Iinkqubo zeMedicaid zombuso ezihlawulelwayo zezinye zabahlawuli bezempilo abangafunekiyo ukuba bahlawulele uvavanyo lomhlaza wemiphunga kubantu abasengozini enkulu. Umbutho weLung uhlalutye imigaqo-nkqubo yokuhlolwa komhlaza wemiphunga kwiinkqubo zenkonzo zeMedicaid zokuhlola imeko yangoku yokujongwa komhlaza wemiphunga kubantu beMedicaid kwaye yafumanisa ukuba iinkqubo ezingama-40 zeMedicaid zomrhumo wenkonzo zigubungela uvavanyo lomhlaza wemiphunga, iinkqubo ezisixhenxe aziboneleli, kwaye amazwe amathathu ayengenalo ulwazi olufumanekayo kumgaqo-nkqubo wabo wokhuseleko.
Ngelixa iziphumo zengxelo ze "State of Lung Cancer" zibonisa umsebenzi obalulekileyo ekufuneka wenziwe, kukho ithemba. NgoMatshi ka-2021, i-United States Preventive Services Task Force yandise isindululo sayo sokujongwa ukuze ibandakanye uluhlu lweminyaka yobudala kunye nabatshayayo bangoku okanye ababefudula betshaya. Oku kwandisa kakhulu inani labasetyhini kunye nabaMnyama baseMelika abakulungeleyo ukuhlolwa umhlaza wemiphunga.
I-Lung Association ikhuthaza wonke umntu ukuba ajoyine iinzame zokuphelisa umhlaza wemiphunga. Yiya kuLung.org/solc ukuze ufunde ngakumbi ngomhlaza wemiphunga kwilizwe lakho kwaye usayine isicelo sethu sokwandisa inkxaso-mali kumaZiko oLawulo lweSifo kunye noThintelo lokukhusela impilo yesizwe sethu kwizifo, kubandakanya nomhlaza wemiphunga.
Kubantu abatshayayo ngoku kunye nabangaphambili, kukho izixhobo zokusindisa ubomi. Fumanisa ukuba ukulungele na ukuvavanyelwa umhlaza wemiphunga kwa SavedByTheScan.org, uze uthethe nogqirha wakho malunga nokuvavanywa.